Ugaas Xasan: Wasiir Soomaali ah oo sheegay in shaqadiisa uu ku waayay cod sir ah oo laga duubay | Gaaroodi News
Ugaas Xasan: Wasiir Soomaali ah oo sheegay in shaqadiisa uu ku waayay cod sir ah oo laga duubay
Ugaas Xassan wasiirkii hore ee warfaafinta Koonfur Galbeed
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay baraha bulshada qabsaday cod sir ah oo laga duubay wasiirkii hore ee warfaafinta Koonfur Galbeed, Ugaas Xassan Cabdi oo aan la garaneynin xilliga la duubay.
Ugaas Xassan oo u muuqday in uu ku kalsoon yahay qofka uu la sheekeysanayo, xogtana uu la wadaagayo ayaa sidoo kale waxaa codka laga dhex maqlay in qofka uu ku xan-qarsanayo uu bannaanka soo dhigo waxa jira, loona baahan yahay in waxa ay damacsan tahay madaxtooyada bannaanka lasoo dhigo oo dadku ay ogaadaan. Ugaas Xassan, oo madaxtooyada kula kulmay madaxda maamulkaas
Wasiirka shaqada laga qaaday oo la hadlay BBC-da waxaa uu sheegay in codka laga duubay uu yahay mid sax ah, balse uusan fileynin, sidaasina uu sameeyay qof ay aad isugu dhaw yihiin.
“Nin aan saaxiibo ahayn ayaa si khaldan oo sharafta ban’aadamka iyo dadnimada ka baxsan cod iiga duubay, kadibna baraha bulshada si khaldan loogu baahiyay, taasina ay sabab u noqotay in xilkii aan ka haya dowlad goboleedka Koonfur Galbeed la iga qaado”, ayuu yiri Ugaas Xassan oo la hadlay BBC-da.
Waxaa kale oo uu wasiirka sheegay in qofkii ka duubay codka uu cafis ka dalbaday, arrintaasina uu aqbalay.
“Ma khaldame waa Alle, walaalkey codka iga duubay wuxuu qiray in uu khaladamay, dembina ay ahayd waxa uuu sameeyay, annigana waxaan go’aansaday in saaxibka sida khaldan codka iiga duubay aan cafiyo”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Wasiirkii warfaafinta ayaa kamid ahaa wasiiradii lasoo shaqeeyay dowladii Shariif Xassan, waxaana xilkaas uu hayay muddo lix sano ah.